intengo yomshini wezinhlanzi,abakhiqizi bemishini yokudada yezinhlanzi ezintantayo
Amandla:22KW + 0.75KW + 1.5KW izigaba ezintathu
Ubuchwepheshe bokusebenza kwe-extrusion buye babaluleke kakhulu ekwenziweni kokuphakelwa kwesimanje okusetshenziswa kwezolimo zasolwandle. Eminyakeni yamuva kuye kwaba nokukhula okuqhubekayo ekusebenzeni kokudla okukhishwa kokudla okwenziwa emanzini. Ukuphakelwa kwe-Aquatic by extrusion kunokuqina okuphezulu kwamanzi, indawo enhle yokuntanta kanye namandla aphakeme kunokudla okuphekiwe, okufaka isandla ekwandeni kokukhula kwezinhlanzi kanye nokwenza ngcono ekuguqulweni kwezidingo. Ngakho-ke kuqhathaniswa nenqubo ejwayelekile yokujwayela, ubuchwepheshe be-extrusion buyindlela ephumelela kunazo zonke yokwenza ngcono ukusebenza kokuphakelwa emanzini.
Umkhiphi kanye noMkhuzi
Ama-extruder kanye nesandisi imishini yokuphakelwa kwezinhlanzi esebenza ngokuyikho nobuchwepheshe bokukhulisa ekukhiqizeni ama-feed e-feed. umshini wokuphakelwa kwezinhlanzi uyi-bio-reactionor enikeza ingcindezi edingekayo yokuphoqelela ukuphakela imiphongolo emgqonyeni ngokusebenzisa isheya elinqunyelwe. Ngokushintsha kwezinga lokushisa, ingcindezi, nokwembatha ngaphakathi emgqonyeni, impahla eluhlaza is homogenis ngenkani ngaphambi kokuthatha ukwakheka kwesisekelo sokuvula kokufa. Okokusebenza kwe-extrusion ikakhulukazi kwenziwa ngedivaysi yokuhambisa amandla, insiza yokondla, Isimo sangaphambi kwesikhathi, ukugoqa umshini wokupholisa wezinhlanzi nokuphelisa insimbi yokusika, njll. Umgqomo we-extruder wakhiwa ngamakhanda emigqomo, isikulufa auger, flow imikhawulo (ebizwa ngokuthi ama-shearlocks) bese kufa isiphambano.
Ama-expanders ayafanana nabangaphandle, kepha banomehluko emiphumeleni yokwelashwa kanye nezicelo. Ama-expanders ajwayele ukusetshenziswa njengezimo zokukhanyisa zokwelapha izinto zokwakha okunzima ukuzisebenzisa, ukwandisa ukuhlukunyezwa kwamaseli we-cellulose nezakhi zamaprotheni ukuze enze ukuhlanzeka kokudla. Ama-extruders aqukethe imiphongolo ene-screws eyodwa noma ezimbili zokuhambisa izinto futhi ziziphoqe ngokufa. I-extrusion ingabhekwa njengokwelashwa kwe-shear ephezulu. Isenzo se-shear ngesikhathi sokwelashwa okwandisa sincane kakhulu. Qhathaniswa ne-extruder, ukusebenziseka lula kwesandisi kuvumela ukwelashwa okusebenzayo kwenani elikhulu lokuphakela ngentengo ephansi. Umshini wokudla wezinhlanzi ezintantayo uthole indima ekhiqizayo yokudla kwezinhlanzi. Okweqile, kunezinhlobo ezahlukene ezikhona emakethe, njengezikulufo zesikulufa esisodwa, amawele isikulufa extruders, umshini wokupholisa izinhlanzi, umshini wokudla owomile wenhlanzi nokunye.
Uhlobo Olomile kanye Nomshini Wokondla Izinhlanzi Wet Type
Uhlobo lomshini owomile wokuphapha wezinhlanzi uhlobo lo mshini olungadingi ubhemisi wokushisa noma umjovo wegesi noma ukufudumeza kwejazi, futhi konke ukufudumeza komkhiqizo kwenziwa ngemishini yempi yokufudumeza yemishini. Ngaphandle kokusebenzisa i-preconditioning, i-extrusion eyomile isebenzisa amazinga aphansi omswakama. Ngakho-ke kufanelekile ukucubungula umswakama ophansi nezinto zokuphaka ezinamafutha amaningi.
Ngenkathi uhlobo olumanzi lomshini wokudla wezinhlanzi olintantayo luyingxenye yemishini eyinkimbinkimbi enamasistimu anembile we-metering wesikebhe noma umjovo wamanzi ku-conditioner kanye / noma umgoqo we-extruder. Ukwahlulela kusinyathelo esibaluleke kakhulu kwinqubo emanzi yokuphuma ukuze ukumelana kwamakhemikhali noma ngokomzimba kwenzeke. Inhliziyo yomshini wokuphapha wezinhlanzi ezintantayo osebenzayo: ukuhlela, ukupheka nokufa ngokushintshana. Ukushisa okuphezulu kanye nenqubo yokucindezela okukhulu kungabulala i-salmonellosis kanye nokutheleleka kwamagciwane futhi kwenza ama-pellets ukuthi agaye kalula.
Izinzuzo ze-Pellet ye-Aqua-feed Pellet
Amandla womuntu okhipha izigqila zithuthukisa ukuguquguquka komenzi wokuphakelayo ukukhiqiza iziqalo zokudla kwezinhlanzi ze-shrimp, udoti, i-eel, inhlanzi eyikati, i-carp, amasele nokunye..
2.I-starch gelatinization ephezulu
Izinto zokuphakelayo zihamba ngokusebenza kwe-HTST, ukwanda kwe-starch gelatinization degree kungafinyelela 80-99% ezilwaneni zasemanzini zigaya kalula.
3.Ukugaya okungcono nokumunca
Ama-pellets angaqhuma ngokushesha esiswini senhlanzi ulahlekelwa izakhi zomzimba (ngesikhathi sokuvuselela), okunomthelela ekutholeni kangcono izakhamzimba.
4.Ukuqina kokuqina kwamanzi
Ama-pellets ezintantayo amelana nokuqhekeka emanzini futhi okuphakelayo okuntantayo kuvumela umlimi wezinhlanzi ukubona isimo senhlanzi kanye nenani lokuphakelayo okusetshenziswayo.
5. Ukufakwa emanzini
Okuqukethwe komswakama we-extrusion ngenkathi kucubungulwa kungalawulwa ngaphezulu kobubanzi obuningi, esiza ukusiza ukukhulisa ukuzinza kwamanzi kokuphakelayo kokugcina. Lama pellets amunca amanzi amaningi, igcina ukubumbeka isikhathi eside futhi iphumela ekunciphiseni kokulahleka kwezakhi. Izuzisa izimfanelo zobuchwepheshe be-pellet nempilo yezinhlanzi.
6.Elula ukulawula ukuzwela kwabantu
Kuyenzeka ngokuphelele ukuba umuntu owangaphandle akhiqize okuphakelayo okuntantayo, okuphakelayo kokuphakelayo kanye nokupholisa okucwilayo okuhamba kancane ngokulawulwa kokuqina kwabantu; lokho kuvumelana kakhulu nezinhlobo zezinhlanzi ezihlukile.
Idatha Yobuchwepheshe Yomshini Wokuphakela Izinhlanzi Ontantayo
Ividiyo yomshini wokuphakelwa kwezinhlanzi